In la guuro | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / In la guuro
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 2 7 2019
Wax badan ayay tahay in laga fikiro marka aad hesho guri. Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad ku saabsan waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay inaad ogaato.
Ka bax heshiiski kirada ee hore
Haddii aad ka guurayso guri kiro ah waa inaad ka baxdaa heshiiskaagan. Wakhtiga heshiis ka bixida way ku kala duwanaan karaan shirkadaha guryaha ee kala duwan. Waxaa talobixin ah in heshiiska guriga looga baxo si qoraal ah.
Diiwaan-gelinta dadweynaha, baddelka cinwaanka iyo boosta la iska soo daba diro
Diiwaan-gelinta dadweynaha micnaheedu waa inaad ka diiwaan gashantahay Hey'ada Cashuuraha inaad degantahay degmo ku taala Iswiidhan. Xuquuqo iyo waajibaad badan oo aad leedahay waxay ku xiranyihiin inaad tahay qof ku jira diiwaan-gelinta dadweynaha. Adigu waa inaad tusaale ahaan ku jirtaa diiwaan-gelinta dadweynaha si aad u hesho kaalmooyinka qaarkood una codayn karto xilliga doorashooyinka siyaasadeed.
Marka aad guurto waa inaad wargelinta guuritaanka ka samaysaa dhanka Hey'ada Cashuuraha. Wargelinta guuritaanka waxaad u samaynaysaa si diiwaan-gelintaadu u ahaato sax iyo si boostaadu u timaado cinwaankaaga cusub. Adigu waxaad xitaa dalban kartaa in lagaa soo daba diro boostaada, tani micnaheedu waa in boosta loo diray cinwaankaagi hore loo soo diray cinwaanka cusub. Ka soo dabo dirida boosta waxaa laga codsadaa Svensk Adressändring.
Akhri dheeraad ku saabsan diiwaan-gelinta dadweynaha iyo wargelinta guuritaanka oo ku qoran Hey'ada Cashuuraha boggeeda intarnatka.
Akhri dheeraad ku saabsan ka soo daba dirida boosta iyo baddelka cinwaanka kuna qoran bogga intarnatka ee Adressändring.se
Rukmasho iyo heshiis
Waxaa jiri kara dhowr rukmasho iyo heshiisyo oo aad u baahantahay inaad la guurto ama iska joojiso. Ka fikir in heshiisyo badan leeyihiin wakhtiga ogeysiiska joojinta ama wakhtiga lagu xiranyahay heshiiskan, markaasi waxaa fiicaan inaad iska joojiso wakhti fiican ka hor intaanad guurin. Tusaale ka mid ah rukmashada iyo heshiisyada u baahan kara in lala guuro ama la iska joojiyo waa:
Kanaalada Tiifiiga-ga ee lacagta laga bixiyo
Waa muhiim in la lahaado caymis ilaalinaya adiga iyo alaabtaada. Ku dhawaad dhamaan guryaha Iswiidhan waxay leeyihiin caymiska guriga. Caymiska guriga waa ilaalin aasaasi ah taas oo kuu magdhabi karta alaabtaada haddii lagaa xado ama ay ku dhaawacmaan dab ama dhaawac biyo soo gaaro. Caymiska gurigu wuxuu ilaaliyaa xitaa dhamaan dadka ku qoran warqada caymiska ee ku nool isku guri. Waxaa intaasi dheer in caymisyada guriga ay ku jiraan waxyaabo ay ka midyihiin caymiska safarka.
Akhri dheeraad ku saabsan caymiska guriga oo ku qoran bogga intarnatka ee Konsumenternas.se
Nadiifinta xilliga guritaanka iyo kantaroolida
Badanaaba adiga ayaa mas'uul ka ah nadiifinta xilliga guuritaanka marka aad ka baxayso guri iyadoo aan loo eegayn haddii aad ku jirto fiilo, guri la bar iibsaday ama guri kiro ah. Nadiifinta xilliga guuritaanka way ka baahsantahay nadiifinta toddobaadka ee caadiga ah oo waxay qaadataa wakhti badan. Adiga ayaa keligaa nadiifin kara xilliga guuritaanka ama waxaad wakiilan kartaa shirkad. Haddii nadiifinta xilliga guuritaanka aanay fiicnayn waxaa waajib qofka ku noqon karta inuu bixiyo magdhabid.
Caadiyan guriga waa la kantaroolaa marka qofka kireystaha ahi ka guurayo oo waxaa la qoraa dukumenti kaas oo lagu qoro wixi dhaawacyo ah ee jiri kara. Guri kireyste waxaa waajib ku noqon karta inuu magdhabo dhaawacyada soo gaaray guriga.
Akhri dheeraad ku saabsan kantarloolida guriga kuna qoran Ururka Kireystayaasha boggooda intarnatka.
Waxaa muhiim ah inaad hesho dhamaan furayaasha gurigaaga cusub. Haddii aad u soo guurto guri kiro ah waxaa fiican inaad is-barbardhigto dukumentiga kantaroolida gurigaaga si aad u eegto inaanay jirin dhaawacyo ku yaala gurigaaga oo aan la ogayn.
Macluumaad dheeraad ah oo ku qoran boggaga intarnatka ee kale
Hel macluumaad dheeraad ah, talo-bixin iyo taageero laga helo Ururka Kireystayaasha boggooda intarnatka. Daawo filimada macluumaadka kuna saabsan in la guuro ee laga helo Hey'ada Cashuuraha boggeeda intarnatka.